ISAHLUKO 9: UKWENZA ISIQINISEKISO KWIINJONGO-Geofumadas
ISAHLUKO 9: osnap
Nangona sele sizijongile iindlela ngeendlela zokuzoba ngokuchanekileyo izinto ezahlukileyo, ngokuziqhelanisa, njengoko umzobo wethu untsonkotha ngakumbi, izinto ezintsha zidla ngokwenziwa kwaye zihlala zibekwe ngokunxulumene noko sele kutsaliwe. Oko kukuthi, izinto esele zikho kumzobo wethu zisinika izingqinisiso zejometri yezinto ezintsha. Rhoqo sihlala sifumana, umzekelo, ukuba lo mgca ulandelayo uvela embindini wesangqa, ukusuka kwi-vertex enikiweyo yepoligoni okanye ukusuka kumbindi womnye umgca. Ke ngoko, i-Autocad ibonelela ngesixhobo esinamandla sokubonisa ngokulula la manqaku ngexesha lokuqhutywa kwemiyalelo yokuzoba ebizwa ngokuba yiRejidence ye-Object.
Ukubhekiswa kwezinto ke kuyindlela ephambili yokusebenzisa ithuba leempawu zejometri yezinto esele zenzelwe ukwakhiwa kwezinto ezintsha, kuba zisinceda ukuba sichaze kwaye sisebenzise amanqaku anjengombindi, ukunqamleza kwemigca ye-2 okanye indawo exineneyo phakathi kwabanye. Kufuneka kwakhona kutshiwo ukuba isiQinisekiso seNjongo luhlobo olucacileyo lomyalelo, oko kukuthi, inokuthintelwa ngexesha lokuphunyezwa komyalelo wokuzoba.
Indlela ekhawulezayo yokusebenzisa isalathiso esahlukileyo kwizinto ezifumanekayo kukusebenzisa iqhosha kwibar yewonga, ekuvumela ukuba usebenze izingqinisiso ezithile, kwaye siyanyanzelisa, nokuba sele siqalisile ngomyalelo wokuzoba. Masithathele ingqalelo.
Masibone umzekelo. Sizoba umgca othe ngqo oya kuthi isiphelo sawo sihambelane ne-vertex yecala kwaye elinye kunye ne-quadrant kwiipesenti ezingamashumi asithoba zesangqa. Kuzo zombini iimeko siza kwenza izingqinisiso kwizinto ezifunekayo ngexesha lokuqhutywa komyalelo wokuzoba.
Isalathiso sezinto ezivunyelwe ukwakha umgca konke ukuchaneka kwaye ngaphandle kokukhathazeka ngokwenene malunga nokudibanisa, i-angle okanye ubude bento. Ngoku masifune ukongeza isangqa kwesi siqwengu esikwindawo yaso idibana nesangqa esikhoyo (sisinxibelelanisi sesinyithi kwimbonakalo esecaleni). Kwakhona, iqhosha lesalathiso se-Object liya kusivumela ukuba sifumane eli ziko ngaphandle kokuguqukela kwezinye iiparameter ezifana nokulungelelanisa kwayo iCartesian.
Ukubhekiswa kwezinto ezinokusebenza ngokuqhosha kunye nembonakalo yazo inokubonakala ngokukhawuleza.
Ukongeza kwezo zangaphambili, sinezinye iimbekiselo zezinto kwimenyu yokuma ukuba, ngexesha lomyalelo wokuzoba, sicinezela iqhosha elithi "Shift" emva koko iqhosha lemouse lasekunene.
Isimo esingaqhelekanga kwezinye zeereferensi ezibonakala kule menyu kukuba azithethi ngokungqongqo kwiimpawu zejometri zezinto, kodwa kulwandiso okanye kwizinto ezikhutshwayo. Oko kukuthi, ezinye zezi zixhobo zichonga amanqaku abakhona kuphela phantsi kweemeko ezithile. Umzekelo, ireferensi "yolwandiso", esiyibonileyo kwividiyo yangaphambili, ibonisa, ngokuchanekileyo, i-vector ebonisa intsingiselo enokubakho umgca okanye iarc ukuba ibibanzi. Isalathiso "i-Fictional interversal" sinokuchonga umba ongekho kwindawo enamacala amathathu njengoko sikubonile kwividiyo.
Omnye umzekelo sisalathiso "esiphakathi phakathi kwamanqaku e-2", ethi, njengoko igama lisitsho, sisebenzela ukumisela umbindi phakathi kwamanqaku amabini, nokuba loo ndawo ayinanto yakwenza nayo nayiphi na into.
Ityala lesithathu elisebenza kwicala elinye, oko kukuthi, ukuseka amanqaku afunyenwe kwijiyometri yezinto kodwa angengawo awokungqinelani, sisalathiso "Esivela", esivumela ukuchaza inqaku kumgama othile ukusuka Enye inqaku lesiseko. Ke le "Reference Reference" inokusetyenziswa ngokudibeneyo nezinye iimbekiselo, ezinje nge "End point."
Kwiinguqulelo zangaphambili ze-Autocad, kwakuqhelekile kakhulu ukuba kusebenze isixhobo sefowuni "iiRejista zezinto" kwaye ucinezele amaqhosha ezalathiso ozifunayo embindini womyalelo wokuzoba. Olu qheliselo lusenokwenziwa, nangona ukubonakala kwebhanti ejongene nokubonakalayo kuthanda ukucima indawo yomzobo kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kweebar zesixhobo. Endaweni yoko, ngoku ungasebenzisa iqhosha lokuthoba ezantsi kwbar yewonga, njengoko besikhe satsho ngaphambili. Nangona kunjalo, i-Autocad ikwabonelela ngendlela yokuvula ngokuzenzekelayo isalathiso esinye okanye ngaphezulu sokusetyenziswa ngokusisigxina xa uzoba. Ukwenza oku, kufuneka siqwalasele indlela yokuziphatha kwe "Refer yezinto" ngombono ohambelanayo wedayalog ye "Drawing parameter".
Ukuba kule ncoko sisebenza, umzekelo, izingqinisiso "Endpoint" kunye "neZiko", ezo ke ziyizalathiso esiya kuthi sizibone ngokuzenzekelayo xa siqala umzobo okanye ukuhlela umyalelo. Ukuba ngelo xesha sifuna ukusebenzisa enye ireferensi, sisenokusebenzisa iqhosha kwibar yewonga okanye kwimenyu yokuqukethwe. Umahluko kukuba imenyu yokubhaliweyo izakusebenza kuphela into eyimfuneko ekubhekiswa kuyo okwethutyana, ngelixa ibhokisi yencoko yababini okanye ibar yewindows ibar yomsebenzi iya kuzishiya zisebenza kule miyalelo ilandelayo yokuzoba. Nangona kunjalo, akululanga ukwenza zonke iimbekiselo zezinto ezikwibhokisi yencoko, nokuba kuncinci ukuba umzobo wethu uqukethe inani elikhulu lezinto, kuba inani lamanqaku abonisiweyo angankulu kangangokuba impumelelo yeereferense ingalahleka. Nangona kuya kufuneka kuphawulwe ukuba xa kukho amanqaku amaninzi esalathiso sezinto ezisebenzayo, sinokubeka isikhombisi kwindawo ethile kwisikrini kwaye cinezela iqhosha elithi "TAB". Oku kuyanyanzela i-Autocad ukuba iye kubonisa izikhombisi ezikufutshane nesikhombisi ngelo xesha. Ngokuchaseneyo, kunokuba namaxesha apho sifuna ukwenza yonke imigqaliselo kwizinto ezizenzekelayo ukuba, umzekelo, sibe nenkululeko epheleleyo nesikhombisi esikrinini. Ngala matyala, singasebenzisa ukhetho "Lutho" kwimenyu yemeko ebonakala ngeqhosha le "Shift" kunye neqhosha leqhosha lasekunene.
Kwelinye icala, kuyabonakala ukuba i-Autocad ikhomba kwindawo yokuphelisa, umzekelo, ngendlela eyahlukileyo kuleyo ibekwa ngumbindi kwaye le nto yona ezahlula ngokucacileyo kwiziko. Indawo nganye yesalathiso inophawu oluthile. Nokuba ezi phawu ziyavela okanye azibonakali, nokuba isikhombisi "sitsaliwe" kuloo nqaku, simiselwe kukumiselwa kwe-AutoSnap, engeyiyo into eyongeziweyo kuncedo lokubonakalayo "ireferensi yento". Ukucwangcisa i-AutoSnap, sisebenzisa i "Drawing" tab yebhokisi ye- "Options" ibhokisi yencoko ebonakala ngemenyu yokuqala ye-Autocad.
Post edlulileyo«Edlulileyo 8.5 Tables
Post Next 9.1 amanqaku lwangaku kwaye izihluzi .WathiOkulandelayo "